Medicare 101: Qorshayaasha - mareegaha blog -ka rasmiga ah ee CHPW Awoodda beesha Barta rasmiga ah ee CHPW
Medicare 101: Qorshayaasha
Caafimaadka & Fayaqabka | Oktoobar 14, 2021
Caymiska caafimaadka kadib markaad gaarto 65 jir? Aan ka hadalno xulashooyinka.
Diiwaangelinta Furan ee 2022 qorshayaasha caymiska caafimaadka Medicare waxay bilaabmaysaa Oktoobar 15. Ka -faa'iideystayaasha Medicare -ka ah ee Washington oo ah 1.3 milyan, nidaamku wuxuu noqon karaa mid jahawareer leh - gaar ahaan marka ay timaaddo doorashada qorshaha adiga kugu habboon.
Taasi waa sababta aan ugu dhex soconno noocyada qorshayaasha Medicare ee ay heli karaan dadka 65 iyo ka weyn.
Ma ogeyd? Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino. Khubaradayada Medicare ee ruqsada haysta ayaa kaaga jawaabi kara su'aalaha oo kaala hadli kara fursadaha, taleefan ama qof ahaan. waxay ku furantahay daaqad cusubAan isku xirno.
Waa maxay noocyada kala duwan ee qorshooyinka Medicare?
Waxaa jira dhowr nooc oo caymiska caafimaadka Medicare:
Dheeraad ah (Medigap)
Intaa waxaa dheer, Qorshayaasha Caafimaadka ee U Qalma waxaa kaloo heli kara dadka reer Washington ee da 'kasta leh.
Medicare -ka asalka ah (OM) waxaa heli kara inta badan dadka ka weyn 65 sano, iyo sidoo kale dadka ka yar 65 ee qaba naafo gaar ah.
Medicare -ka asalka ah waxaa lagu bixiyaa saddex qaybood:
Qaybta A, ama caymiska isbitaalka, wuxuu daboolayaa noocyo kala duwan waxay ku furantahay daaqad cusubdaryeelka bukaan -jiifka
Qaybta B, ama caymiska caafimaadka, ayaa daboola waxay ku furantahay daaqad cusubdaryeel caafimaad oo lagama maarmaan u ah ka -hortag.
Caymiska Qaybta D wuxuu daboolayaa daawooyinka dhakhtar qoray.
Saddexdaa qaybood waa in si gaar ah loo iibsadaa oo si gooni ah biil loogu soo diraa. Medicare-ka asalka ahi ma laha jeebka ugu badan, taas oo macnaheedu yahay in aanay xad lahayn inta aad ku bixin karto kharashyada caafimaadka sannadkii.
Si ka duwan Medicare Advantage qorshooyinka, Medicare -ka asalka ah kuma jiraan faa'iidooyinka la xoojiyay sida caymiska ilkaha ee dheeraadka ah ama xubinnimada jimicsiga.
Medicare-ka asalka ah ayaa laga yaabaa inuu adiga kuu yahay haddii aad ku qanacsan tahay adiga oo aan ugu badnayn jeebka oo aad rabto inaad si gaar ah wax uga iibsato meelaha caymiskaaga caafimaad sida ilkaha, aragga, iyo daawooyinka.
Qorshayaasha Faa'idada Medicare (MA) waxay u shaqeeyaan si la mid ah Medicare-kii asalka ahaa-laakiin leh faa'iidooyin la xoojiyay, hal kaar xubin iyo qaddar bille ah, iyo ugu badnaan jeebka ka baxsan.
Qorshayaasha Faa'idada Medicare waxay daboolayaan Qaybaha A iyo B (caymiska caafimaadka/ka -hortagga) ee Medicare -ka Asalka ah. Qorshayaasha MA waxay leeyihiin ugu badnaan jeebka si ay u hubiyaan dabool sanadeed ah waxaad ku bixiso caymiska caafimaadka.
Qorshayaal badan oo Faa'idada Medicare, oo ay ku jiraan waxay ku furantahay daaqad cusubkuwa ay bixiyaan Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington, sidoo kale bixiyaan dheefaha la xoojiyay ama dheeraadka ah, sida:
Caymiska daawada ee dhakhtar qoray
Ka -hortagga iyo daboolidda ilkaha oo dhammaystiran
Faa'iidooyinka la xoojiyay sida ilaha fayaqabka, cuntooyinka la bixiyo ka dib joogitaanka isbitaalka, raacitaanka ballamaha caafimaadka, iyo waxyaabo kaloo badan
Si ka duwan Medicare -ka Asalka ah, qorshooyinka Faa'idada Medicare looma qaybiyo qaybo kala duwan. Waxaad u isticmaashaa hal kaar si aad u hesho adeegyada oo aad u bixisid hal bil oo caymis ah (haddii qorshahaagu leeyahay qaddar).
Qorshayaasha Faa'idada Medicare waxaa laga heli karaa Washington qof kasta oo u qalma Medicare Original. Iyada oo ku xidhan dakhligaaga iyo baahiyahaaga caafimaad, qorshayaasha Faa'idada Medicare waxay ku kici karaan kharash yar iyagoo daboolaya adeegyo badan.
U fiirso fiidiyahaan 2-daqiiqo ah si aad dib ugu soo ceshato farqiga u dhexeeya Medicare Original iyo Faa'idada Medicare:
Qorshayaasha Dheeraadka ah, aka Medigap
Medigap waa kaabis ikhtiyaari ah Medicare Original. Dadka haysta Qaybaha Medicare A iyo B waxay iibsan karaan caymiska Medigap.
waxay ku furantahay daaqad cusubMedigap ayaa daboolaya Waxyaalaha qaarkood oo Medicare -ka asalka ahi aanu lahayn, sida caymiska caafimaadka markaad u safrayso meel ka baxsan Maraykanka.
Haddii aad ku faraxsan tahay Medicare Original (OM) laakiin aad rabto in lagaa caawiyo bixinta qaar ka mid ah kharashaadka daryeelka caafimaad ee OM uusan daboolin, tani waxay kuu noqon kartaa doorasho wanaagsan.
Caarada Pro: Haddii aad xiisaynayso caymiska hodanka ah marka loo eego Medicare -ka asalka ah laakiin aan awoodin ama ballan -qaadin qorshe dheeri ah, waxaan ku talinaynaa in la tixgeliyo a Medicare Advantage qorshe.
Qorshayaasha Kharashka Zero
Qorshaha caafimaadka ee Kharashka Zero, oo sidoo kale loo yaqaan qorshe caymis caafimaad oo eber doolar ah, waa nooc ka mid ah qorshaha Faa'idada Medicare oo leh qiimayn bille ah $ 0.
Dabooliddu waxay ku xiran tahay qorshaha. Tusaale ahaan, Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee qorshayaasha eber ee Washington ee 2022 annagaa leh waxay ku furantahay daaqad cusubLabada Qorshe, waxay ku furantahay daaqad cusubMa jiro Qorshe Rx, Iyo waxay ku furantahay daaqad cusubQorshaha 1.
Haddii aad rabto caymis si aad u ilaaliso caafimaadkaaga, laakiin aanad marar badan xanuunsan, waxaa habboon in la baaro qorshe kharash eber ah.
Qorshaha Caafimaadka U Qalma
Qorshayaasha Caafimaadka ee Takhasuska leh (QHP) waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo suuqa caymiska caafimaadka federaalka ama gobolka (oo sidoo kale loo yaqaan “Beddel”) - WA waxaan ku leenahay waxay ku furantahay daaqad cusubWashington Healthplanfinder.
Qorshayaasha Caafimaadka ee Takhasuska leh ayaa bixiya shahaadada suuqa waxay ku furantahay daaqad cusubfaa'iidooyinka caafimaad ee lagama maarmaanka ah sida ku cad Xeerka Daryeelka La -Awoodi Karo. Qorshayaashaani waxay raacaan xadka la dejiyey ee wadaagga kharash-bixinta (ka-jarisyada, wada-bixinta, iyo xaddiga ugu badan ee jeebka ka baxsan) waxaana heli kara dadka da 'kasta leh.
Waxaa jira saddex nooc (oo sidoo kale loo yaqaan “heerarka birta”) ee Qorshayaasha Caafimaadka ee Takhasuska leh: Naxaas, Qalin, iyo Dahab. Farqiga u dhexeeya iyaga ayaa ah boqolkiiba kharashka daryeelka ay daboolayaan. Nooc kasta oo qorshe ah wuxuu daboolayaa daawooyinka, isbitaalka, iyo daawooyinka dhakhtar qoray, wuxuuna leeyahay ugu badnaan jeebka.
Si kastaba ha ahaatee, Qorshaha Caafimaadka U Qalma ma dabooli doono ilkaha, aragga, ama dheefaha la xoojiyay.
Haddii aadan u -qalmin Medicare, waxaa laga yaabaa inaad u -qalanto Qorshaha Caafimaadka Takhasuska leh. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad hore u lahayd Medicare, waa sharci darro in qof kaa iibiyo Qorshaha Caafimaadka U Qalma.
« Wada -hawlgalayaasha Xarunta Caafimaadka Bulshada: Horumarinta Sinnaanta & Helitaanka
BOO hargabka »